မီးဖွား ပြီးနောက် "ရင်သား" နှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးလာသည့်
အချိန်၊ နို့မ ထွက်သည့် အချိန်နှင့် အရင်တိုင်း ပြန်ဖြစ်ဖို့ အတွက်
ဖြေရှင်း မှုကို မိတ်ဆက် ပေးပါမည်။
ရင်သားကြီး လာလျှင် ဘယ်လို လုပ်ရင် ကောင်းမလဲ?
ရင်သားသည် အရမ်းကို နူးညံ့၏။
ရင်သား ကြီးနေသည့် အတိုင်း ထားလျှင် ပြဿနာ ဖြစ်လာမည်။
သေသေ ချာချာ ဂရုစိုက် ပေးပါ။
တကူး တက ထုတ်လုပ် ထားသည့် မိခင်နို့ ဖြစ်သောကြောင့် ကလေးကို နို့စို့ ခိုင်းရအောင်။ ကလေးက နို့စို့ ခြင်းဖြင့် နို့လမ်း ကြောင်းလည်း ကျယ်လာမည်။
(ဘယ်ညာ နှစ်ဖက် ပြောင်းပြီး တိုက်ပေးပါ)
နို့တဖက် ထဲကိုပဲ တင်းနေ ခြင်းမှ ပြေလျော့ တဲ့အထိ ဆက်တိုက်
မစို့ ခိုင်းပဲ ငါးမိနစ် ကြာလျှင် တခြား တဖက်ကို စို့ခိုင်းခြင်း ဆိုပြီး
အချိန် တခု သတ်မှတ်၍ ပြောင်းတိုက် ပေးကြ ရအောင်။
နို့တိုက်သည့် အခါ၌ အမြဲ တမ်းက အလျားလိုက် ချီပေမဲ့ ဒေါင်
လိုက် ပြောင်းချီ ကြည့်ခြင်း အစ ရှိသဖြင့် ပုံမှန်နှင့် မတူသော
ချီပုံ ချီနည်းဖြင့် နို့တိုက်လျှင် အမြဲ တမ်းနှင့် မတူ နို့လမ်းကြောင်း
ကိုတက်ကြွ လှုပ်ရှား စေပြီး ပိတ်ဆို့ နေခြင်းအား ဖြေရှင်း ပေးမှု ဖြစ်လာမည်။
နို့အုံ ရောင်ရမ်း နာသည် နို့သီး ခေါင်း၌ ဖြစ်လာသော အနာပေါက်
မှပိုး ဝင်၍ ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်လာသည့် အခါ (bacterial mastitis)
နှင့် မိခင် နို့ရည်က နို့ဂ ရင်း၌ အတုံး အခဲ ဖြစ်ပြီး ရောင်ရမ်းမှု ဖြစ်လာ သည့်အခါ (congestive mastitis) လည်း ရှိ၏။ ရောဂါ
အခြေ အနေက ရင်သား နီပြီး ရောင်ရမ်းခြင်း၊ နာကျင် ခြင်းနှင့် ကိုယ်ပူ ခြင်းများ ဖြစ်လာမည်။ အခြေ အနေ ပိုဆိုး လာလျှင် ဒုက
ဖြစ်စေ နိုင်သောကြောင့် ဒီလို ရောဂါ အခြေ အနေ ဖြစ်ပေါ် လာလျှင် ချက်ချင်းပဲ မီးဖွား ခဲ့သည့် သားဖွား မီးယပ် ဌာန (သို့) နို့ဂရင်း ခွဲစိတ် ဌာနသို့ သွားပြ ကြည့်ပါ။
မာကျောသည့် အစိုင် အခဲ ဖြစ်နေသည့် အပိုင်းကို ကလေး ငယ်အား နို့စို့ ခိုင်းရင်းနှင့် လက်ချောင်း လေးများဖြင့် ဖြည်လျော့
လျှင် ထိုအ ပိုင်း၏ ခဲနေသည့် အရာ ပြေပျောက် သွားမည်။
မိခင် နို့တင်း၍ နာနေတယ် ဆိုပြီး ကိုယ့်ဘာ သာကို အားလုံး ညှစ်ထုတ် ချင်စိတ် ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်လာ ပေမဲ့ ညှစ်ထုတ် လိုက်
သည့် ပမာဏ ကိုလည်း ""ကလေးက လိုအပ် နေသည်"" ဆိုပြီး သင့် ရင်သားက အထင်မှား နေမည်။ အဲ့လို လုပ်လိုက်လျှင် ပိုပြီး
တောင် မိခင် နို့ကို ထုတ်မိပြီး ရောင်ကိုင်း လာခြင်း ရှိမည်။ ရင်သား တင်းလွန်းပြီး မာလာလျှင် ကလေး သောက်ရ ခက်သည့် အချိန်၌ အနည်းငယ် နို့ကို ညှစ်ထုတ်၍ ပျော့သွား အောင်လုပ် သည့် အချိန်နှင့် ဘယ်လိုမှ မခံ နိုင်သည့် အချိန် များ၌ အခြေ အနေ ကြည့်ပြီး ညှစ်ထုတ် ဖို့က လွဲလို့ မရှိ ပေမဲ့ အညှစ် မလွန် စေဖို့ သတိထား ကြရအောင်။
အညှစ် မလွန်ရန် သတိ ထားဖို့ လိုအပ် ပေမဲ့လည်း မညှစ်ရင် မရသည့် အချိန်လည်း ရှိ၏။ ရင်သား ညှစ်သည့် ကိရိယာ ရှိပေ မဲ့လည်း ရင်သားကို ညင်သာစွာ လက်နှင့် ညှစ်သည့် နည်းလမ်း
ကို မိတ်ဆက် ပေးပါမည်။
1. နို့သီးခေါင်း အစွန်း တဝိုက်တွင် လက်မနှင့် လက်ညှိုးကို ထားပါ။
2. သင့် ကိုယ်ခန္ဓာ ဘက်သို့ ရင်သားအား တွန်းပါ။
3. လက်မနှင့် လက်ချောင်းကို ပေါင်း၍ ရင်သားအား ကြင်ကြင် နာနာနှင့် ဖိနှိပ်ပါ။
4. အခြား လက်တ ဖက်ဖြင့် နို့ထည့်မည့် ပုလင်းကို ရင်သား အောက်၌ ထားကိုင်ပြီး မိခင် နို့ကို ခံယူပါ။
မိခင် နို့၏ အနှစ် သာရသည် သွေးကနေ ဖြစ်ပေါ် လာသည်။ ထို့ကြောင့် သွေး အစိတ် အပိုင်းအား အကျိုး သက်ရောက် စေသည့် အစား အစာ များ၌ သတိ ထားရမည်။ အသေး စိတ်အားဖြင့် ကယ်လိုရီ မြင့်သည့် အစား အစာနှင့် ကိတ် အစ ရှိသော နို့ထဲ၌ အဆီဓာတ် ပါဝင် မှုများသည့် အစား အစာကို ရှောင်ပြီး ကောက်နှံ ပင်နှင့် ဟင်းသီး ဟင်းရွက်ကို အဓိက ထား၍ ကျန်းမာ ရေးနှင့် ညီညွှတ်သော အစား အစာကို စားကြ ရအောင်။
နို့ပြွှန်က သေချာစွာ မပွင့် သေးလျှင် ကလေး ငယ်က ကျွမ်းကျင်
စွာဖြင့် မိခင်နို့ မစို့ နိုင်ပါ။ နို့ပြွှန် ပွင့်ဖို့ ရန်မှာ နှိပ်နယ် ပေးခြင်းက
ထိရောက် ပါ၏။ အရမ်း တင်းလွန်းသည့် နို့သည် ကလေး စို့ရ ခက်စေ သောကြောင့် နို့မ တိုက်ခင် အနည်းငယ် နှိပ်နယ် ပေး၍ ဖြည်ပေး ခြင်းက ကောင်း၏။
ရင်သား တင်းလွန်းလျှင် အဖျား ရှိလာခြင်း၊ အကြော တင်းလာ သော အချိန်၌ အအေး ခံလျှင် တော်တော် လေးကို သက်သာ လာမည်။ ဒါပေမဲ့ ရေခဲ တုံးဖြင့် ပြင်းထန်စွာ အအေး ခံခြင်းက အမေ့ နို့ရည် မထွက်ပဲ ဖြစ်လာမည် ဖြစ်သောကြောင့် နူးညံ့စွာ အအေး ခံဖို့ အရေးကြီး ပါ၏။ cooling pad, refrigerated pad များကို သုံးသည့် အခါတွင် မျက်နှာသုတ် ပဝါကို အတော် များများ ထုတ်ပိုးပြီး လုပ်ခြင်း အစ ရှိသော လွန်ကဲတဲ့ အအေး ခံခြင်း မဖြစ်အောင် သတိ ထားကြပါ။
အစ ပိုင်း၌ နို့သီး ခေါင်းသည် ဝန်ထုတ် ဝန်ပိုး ဖြစ်လွယ်၍ အရေပြား ကွာကျခြင်း၊ ဒဏ်ရာ ရခြင်းများ ဖြစ်မည်။ ထိုမှ တဆင့် ပိုးဝင်လျှင် နို့အုံ ရောင်ရမ်းနာ ဖြစ်လာမည်။ မိခင် နို့ဖတ် များကို အသေးစိတ် လဲလှယ် ပေးခြင်းဖြင့် အစဉ် အမြဲ ရင်သား သန့်ရှင်း မှုကို ပြုလုပ် ထားကြ ရအောင်။
နို့အုံ ရောင်ရမ်းလျှင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ?
နို့အုံ ရောင်ရမ်း နာသည် နို့သီး ခေါင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်သည့် အနာမှ ပိုးဝင်ပြီး ရောင်ရမ်းနာ ဖြစ်လာသော အခါ (bacterial mastitis)
နှင့် မိခင်နို့ ရည်သည် နို့ပြွန် လမ်းကြောင်း၌ ပိတ်နေပြီး ရောင်ရမ်း သောအခါ (congestive mastitis) များ ရှိသည်။ ရောဂါ အခြေ အနေ ကတော့ ရင်သား နီပြီး ရောင်လာခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ အဖျား ရှိခြင်း အစရှိ သည်တို့ ဖြစ်ပေါ် လာမည်။ ပိုဆိုး လာလျှင် ဒုက္ခ ဖြစ်လာနိုင် သောကြောင့် ချက်ချင်းပဲ မီးဖွား ခဲ့သည့် သားဖွား မီးယပ် ဌာန (သို့) နို့ဂရင်း ခွဲစိတ် ဌာနသို့ သွားကြည့်ပါ။
နို့ထွက်ခြင်း မထွက် ခြင်းသည် အကြောင်း အရင်း အမျိုးမျိုး ရှိပြီး
တဦးနှင့် တဦး ကွာခြားချက် ကြီးမား၏။ "နို့ထွက် ကောင်းသည့် မိခင်ကို မိခင်ကောင်း" လို့ သတ်မှတ် ခြင်းလဲ မဟုတ်ပါ။ စိတ်ပူပင် သောက မဖြစ် ပါနှင့်။ အကြောင်းရင်း တခုခု ဖြစ်လာ နိုင်ခြေ ကိစ္စကို စမ်းသပ် လုပ်ကြည့် ကြရအောင်။
ကလေးကို နို့စို့ ခိုင်းခြင်းဖြင့် မိခင် နို့ရည် ထုတ်နိုင်ခြင်း နို့ပြွန် လမ်းကြောင်း ပွင့်ခြင်းများ ဖြစ်လာမည်။ အစပိုင်း မထွက် ပေမဲ့ လည်း နို့သီးခေါင်း အတွက် အခက် အခဲ မရှိသည့် အခြေ အနေ ဆိုလျှင် ကလေးကို နို့စို့ခိုင်း လိုက်ပါ။
စားသောက်မှု ပုံစံ ပြန်စဉ်းစား ကြည့်ရ အောင်
ကယ်လို ရီမြင့်သည့် အစား အစာနှင့် အကြော် စာသည် နို့ပြွှန် လမ်းကြောင်းကို ပိတ်စို့မှု အကြောင်းရင်း ဖြစ်သည်။ ကောက်ပဲ သီးနှံ၊ ဟင်းသီး ဟင်းရွက် အဓိက အားဖြင့် ကျန်းမာ ရေးနှင့် ညီညွတ်သော စားသောက်မှု ပုံစံ ဖြစ်အောင် ဂရုစိုက် ကြရ အောင်။
ကောင်းစွာ အိပ်၍ သင့်တင့်သော အားကစားကို
သေချာစွာ အိပ်စက်၍ ကျန်းမာသော လူနေမှု ဘဝကို တည် ဆောက်ခြင်း ကလည်း နို့ထွက် ကောင်းမွန် မှုနှင့် ဆက်စပ် နေပါ
သည်။ မွေးကင်းစ ကလေးအား ပြုစု ရခြင်းကြောင့် အိပ်ရေး မဝ
သည့် မိခင်သည် တော်တော် များသည်လို့ ထင်ပေမဲ့ တခါ တလေ၌ အဖေ့ အကူ အညီကို ယူပြီး စိတ်ချ လက်ချ အိပ်စက် ခြင်းက ကောင်းမွန်ကောင်း ကောင်းမွန် လိမ့်မည်။
နို့ပြွန် လမ်းကြောင်း ပိတ်နေလျှင် မိခင် နို့ရည် လည်ပတ်မှု မရှိ သောကြောင့် အရသာ မရှိ ပါဘူး။ အရသာ မကောင်းလျှင် ကလေးက သိပ်မ သောက်ပဲ နို့ပြွန်၌ ပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်ခြင်း ဆိုသည့်
နို့လမ်းကြောင်း လည်ပတ်မှု ဆိုးရွား ခြင်းကို ဖိတ်ခေါ် နေသလို ဖြစ်နေ ပါ၏။ ပထမ ဆုံးက နှိပ်နယ် ခြင်းဖြင့် နို့ပြွန် ပိတ်နေ ခြင်းကို ယူကြည့် ခြင်းက ကောင်းပါ လိမ့်မည်။
※ နှိပ်ပုံ နှိပ်နည်းနှင့် ပတ်သက်၍ "ကလေး ပြုစု ပျိုးထောင်ခြင်း အပိုင်း：Lesson2 ပထမ ဆုံးအကြိမ် မိခင် နို့တိုက်ခြင်း" ၌ အသေးစိတ် ရေးထား သောကြောင့် ကြည့်ကြည့်ပါ။
ထူးဆန်း သည်လို့ ထင်ရ ပေမဲ့ မိခင်၏ စိတ်ဖိ စီးမှုနှင့် စိတ်ပူ ပန်မှု များသည် မိခင် နို့အား အကျိုး သက်ရောက်မှု ရှိစေသည်။ ထို့ကြောင့် နို့မ ထွက်သည့် ကိစ္စအား စိတ်ပူပန် လွန်ပြီး ထိုအ ရာက စိတ်ဖိ စီးမှု ဖြစ်လျှင် နို့ရည် လည်ပတ် မှုကို ဆိုးရွား စေပါသည်။ ကလေး တယောက်ကို ပြုစု ရခြင်းသည် စိတ်ဖိ စီးမှု ဖြစ်စေ ပေမဲ့လည်း အမျိုးမျိုး တီထွင် ကြံစပြီး စိတ်ဖိ စီးမှုကို လွင့်ထုတ် နိုင်သည့် နည်းလမ်းကို ရှာဖွေ ကြရအောင်။
နို့မှုန့်က ကိုယ့် မိတ်ဆွေ ဖြစ်လာ၏
ယနေ့ခေတ် နို့မှုန့် တွေသည် အမှန် တကယ်ကို အံ့သြ လောက်
အောင် တိုးတက် နေပြီး မိခင် နို့နှင့် တူညီသော အဟာရ ကိုရ
ယူနိုင် လာသည်။ မိခင် နို့တိုက်ခြင်းကတော့ တကယ့်ကို ပြောင် မြောက်သည့် အရာ ဖြစ်ပေ မဲ့လည်း ဒါပဲ တိုက်မည် ဆိုသည့် အစွဲ ကြီးလွန်း ဖို့ရန် မလို အပ်ပါ။ ကလေး အနေ နှင့်လည်း နို့မ
ထွက်ခြင်းကို စိတ်သောက ဖြစ်နေသည့် အမေထက် နို့ဗူး တိုက် ပြီး ပြုံးနေသည့် အမေနှင့် အတူ ရှိချင် မည်လို့ ထင်ပါသည်။
အနည်း ငယ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သက်တောင့် သက်သာ နေလိုက်ပြီး ကလေး ထိန်းမှုကို ပြုလုပ် နိုင်မည် ဆိုလျှင် နို့မှုန့် အကူ အညီကို
ယူမည် ဆိုလည်း ရပါသည်။
နို့မ ထွက်လျှင် မိခင် အရည် အချင်း မရှိ တော့ဘူးလား?
အဲ့ဒီလို ကိစ္စမျိုး မရှိ ပါဘူး။ အရေးကြီး တာက နေ့စဉ် ကလေးနှင့် အဆက် အသွယ် ရှိရန် ဖြစ်၏။ ကလေး သေးခံ လဲပေးသည့် အခါ သေချာစွာ ထိတွေ့ ပေး၍ စိတ်ချင်း ဆက်သွယ် ပေးခြင်း၊ မျက်လုံးကို သေသေ ချာချာ ကြည့်ပြီး စကား ပြောပေး ခြင်းက အရေး ကြီးဆုံး ဖြစ်၏။ နောက်တချက် ကတော့ ကလေး ငယ်ကို ပေးရမည့် ချစ်ခြင်း မေတ္တာ ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် နေစဉ် အတွင်း၌ ပြောင်းလဲ ခဲ့သည့် ရင်သား။
မွေးဖွားခြင်း၊ နို့ဖြတ် ပြီးနောက်၌ ရင်သားက ကိုယ်ဝန် မဆောင် ခင်က အတိုင်း ပြန်ဖြစ် မှာလား ဆိုပြီး စိုးရိမ် ကြမည်။
ကိုယ်ဝန် ဆောင်စဉ်နှင့် နို့တိုက်စဉ် အကြမ်းဖျင်း အားဖြင့်2cup size လောက်ထိ ရင်ဘတ်ကြီး လာတာ များပေ မဲ့လည်း မွေးဖွား ပြီး ၁နှစ် နောက်ပိုင်းမှာ အရင် ဆိုဒ်ကို ပြန်သွား ပါသည်။ တဦး နှင့် တဦး မတူ ညီပဲ ပုံသ ဏ္ဍာန်နှင့် တင်းရင်းမှု ကတော့ စိတ်မ ကောင်းစွာပဲ ကိုယ်ဝန် မဆောင် ခင်က လိုတော့ ပြန်မ ဖြစ်တော့
ကိုယ်ဝန် ရှိခြင်း၊ မွေးဖွားခြင်း မတိုင် မီ၌ ဟိုမုန်းကြောင့် အရောင်မဲ
သွားသည့် မိခင်က များသည်။ အရင် အတိုင်း ပြန်ဖြစ် ချင်မှ ဖြစ်
ပေမဲ့ တဖြည်း ဖြည်းတော့ အရောင်ဖျော့ သွားပါမည်။
အမေနို့ တိုက်ခဲ့ခြင်း မတိုက်ခဲ့ ခြင်းက ရင်သား ပြောင်းလဲ မှုနှင့် မသက် ဆိုင်ပါ။ ကလေး မီးဖွား ဘူးလျှင် ရင်သားက အနည်းငယ်
ပြောင်းလဲ မှုတော့ ရှိပါသည်။ ပြောင်းလဲမှု အတိုင်း အတာသည် မိခင်နို့ တိုက်ခြင်း မတိုက်ခြင်း မဟုတ်ပဲ တဦး ချင်း၏ ကွာခြား ချက်ပေါ် မူတည်၏။
အရင်တိုင်း အနီးစပ်ဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင် တာက?
အရင် ပုံစံ အတိုင်း ပြန်မ ဖြစ်တော့ ပေမဲ့လည်း တတ်နိုင် သမျှ ကိုယ်ဝန် မဆောင် ခင်က အခြေ အနေနှင့် အနီး စပ်ဆုံး ဖြစ်ချင်
တာက မိခင် များ၏ ဆန္ဒ ဖြစ်သည်။ ကလေးကို ပြုစု စောင့် ရှောက် ခြင်းဖြင့် အလုပ်ရှုပ် နေသော မိခင် များကို အားလပ် ချိန်ကြား ကာလ၌ လုပ်နိုင်သည့် အနည်း ငယ်သော အရာကို မိတ်ဆက် ပေးပါမည်။
ကလေးနှင့် အတူ လမ်းထွက် လျှောက်သည့် အခါ အမှတ် တမဲ့ ရှေ့သို့ ခါးကုန်း လာခြင်း မရှိ ဘူးလား? စတိုင် ကျကျဖြင့်
လမ်းလျှောက် ခြင်းက ရင်သား ဆိုဒ်ကြီး မှု၌ ထိရောက်မှု ရှိသည်။
အသား အရေကို တင်းရင်း စေသည့် ဗီတာမင် ကြွယ်ဝသော ဟင်းသီး ဟင်းရွက်နှင့် အသီး အနှံ များကို များများ စားခြင်း
ကလည်း ရင်သား တင်းရင်းမှု နှင့်လည်း ဆက်စပ် နေပါသည်။ နေ့စဉ် ဘဝ ထဲ၌လည်း အနည်းငယ် သတိထား ရုံနှင့် ရင်သား
တင်းရင်း မှုနှင့် ဆက်စပ် နေသည့် ကိစ္စများ ရှိသောကြောင့် လက်တွေ့ လုပ်ဆောင် ကြည့်ကြ ရအောင်။
ရင်သား လျော့တိ လျော့ရဲ ဖြစ်သည့် အခါ၌ အနေ အထားကို ကောင်းမွန် အောင် လုပ်ခြင်း၊ ရင်သား တဝိုက် ကြွက်သား တက်အောင် လုပ်ခြင်းက ရင်သား တင်းရင်း စေခြင်းနှင့် ဆက်စပ်
နေပါသည်။ အလုပ် များတဲ့ မိခင် ဆိုလည်း လွယ်ကူ စွာဖြင့် လုပ်နိုင်သည့် ကိုယ်လက် လှုပ်ရှား မှုကို မိတ်ဆက် ပေးပါမည်။ ကြိမ်းသေ စမ်းသပ် ကြည့်လိုက်ပါ။
လက်ဖဝါး နှစ်ဖက်ကို ရင်ဘက် ရှေ့၌ ထားပြီး အသက်ကိုဖြည်းဖြည်းခြင်း ရှူထုတ်ရင်း ဘယ်ညာ နှစ်ဖက် လုံးကို တူညီ သည့် အားဖြင့် 10~ 20 စက္ကန့် အလယ် ဗဟိုသို့ အားဖြင့် ဖိတွန်း
ရှေ့သို့ ခါးကိုင်းပြီး ပုံမှာ ပြထားသည့် အတိုင်း ကြွက်သား သန်မာ
အောင် လေ့ကျင့်သော အားကစား ပစ္စည်း (dumbbells) ကို
မြှင့်လိုက်၊ ချလိုက် လုပ်မည်။
(dumbbells မရှိသည့် အခါ ရေသန့်ဗူး အခွံ ထဲသို့ ရေထည့်ပြီး
အစား သုံးနိုင် ပါသည်။)
ကြမ်းပြင် ပေါ်တွင် ထိုင်၍ လက်နှစ် ဖက်ကို နောက်၌ ထားပြီး ခြေတ ဖက်ကို ရှေ့သို့ ဆန့်ထုတ်ပါ။ နောက်တ ဖက်ကို ကွေးပြီး
ဆန့်ထားသည့် ခြေ၏ ဒူးခေါင်း နောက်ဘက်တွင် ထားပါ။ လက်နှစ် ဖက်ဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာ အပေါ် ပိုင်းကို ထောက်ခံ ပေး၍
ခါးကို အပေါ် ပိုင်းသို့ စောင်းပြီး ရင်ဘက်ကို မျက်နှာ ကျက်ဘက်
သို့ကော့ ထားပါ။ လည်ပင်းနှင့် ပခုံး အားကို လျော့ထားပြီး ကိုယ်ခန္ဓာ အပေါ် ပိုင်းကို နောက်လှန်ရင်း ရင်ဘက်ကို ဆန့်ထား
※ အကြိမ် အရေ အတွက် ကိုတော့ ကိုယ်လုပ် နိုင်သည့် ဘောင် အတွင်း ကနေပဲ လုပ်ပါ။